Nhumwe Dze Kimberly Process Dzotadza Kuwirirana Pamusoro Pe Zimbabwe
Gumiguru 27, 2010
Nhumwe idzi dzaifanira kunga dzakaburitsa gwaro rinotaura zvadzakawana musangano uri kuitwa mu Israel we KP svondo rinouya usati waitwa. Asi izvi hazvisati zvaitika nekuti nhumwe idzi hadzisi kuwirirana mune zvavakawona
Paita kusawirirana pakati penhumwe dze Kimberly Process dzakaenda ku Zimbabwe mwedzi miviri yapfuura kunoongorora kana Zimbabwe iri kutevedzera zvinodiwa mukuchera nekutengeswa kwemangoda kwaMarange.
Nhumwe idzi dzaifanira kunga dzakaburitsa gwaro rinotaura zvadzakawana musangano uri kuitwa mu Israel we KP svondo rinouya usati waitwa. Asi izvi hazvisati zvaitika nekuti nhumwe idzi hadzisi kuwirirana mune zvavakawona.
Dzimwe nhumwe dziri kutsigira Zimbabwe, asi dzimwe dzinonzi dziri kuti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka. Nhumwe shanu dzemasangano e Zimbabwe akazvimirira dziri kutarisirwa kuenda kunopinda mumusangano we KP uyu ku Israel neChishanu.
Ukuwo mu Zimbabwe ne India, vari kupembedza kunyorerana kwakaita kambani ye Surat Rough Diamond Sourcing ne Zimbabwe Diamond Consortium kutengeserana mangoda anosvika mari ye $1,2 billion yemari yeku America.
Mapepanhau eku India anoti Surat Rough Diamond sourcing yava kukumbira hurumende yayo kuti itambire chibvumirano ichi sezvinonzi zvakatoitwa nehurumende ye Zimbabwe.
Gurukota rezvemigodhi, Va Obert Mpofu, vanoti hurumende inotsigira chibvumirano ichi. Asi regional cordinator ve Crisis in Zimbabwe Coalition, Va Dewa Mavhinga, vanoti chibvumirano ichi hachina kujeka.
Hurukuro naVa Dewa Mavhinga